ချစ်ပ် ထုတ်လုပ်သူ SMIC သည် ရှန်ဟိုင်း တွင် ဖက်စပ် တည်ထောင်ရန် ဒေါ်လာ ၃. ၆ ၅၅ ဘီလီယံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ခဲ့သည် – Pandaily
Nov 12, 2021, 17:13ညနေ 2021/11/12 20:03:37 Pandaily
တရုတ် ထိပ်တန်း ချစ်ပ် ထုတ်လုပ်သူ International Semiconductor Manufacturing Corporation (SMIC) က သောကြာနေ့က ဟောင်ကောင် စတော့အိတ်ချိန်း တွင် ကြေငြာ ခဲ့သည်SMIC ၊ National Integrated Circuit Industry Investment Fund အဆင့် ၂ နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အေဂျင်စီShanghai Lingang Development ရိယာ ဖွံ့ဖြိုး ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေး စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီ၏ ခွင့်ပြု ချက်ဖြင့် ရှန်ဟိုင်း တွင် ဖက်စပ် (JV) တည်ထောင်ရန် သဘောတူခဲ့သည်။
ဖက်စပ် လုပ်ငန်း သစ် ၏စီးပွားရေး နယ်ပယ်တွင် ၁၂ လက်မ အရွယ် ပေါင်းစပ်ထားသော ပတ် ၀ န်းကျင် ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပေါင်းစပ်ထားသော ပတ် ၀ န်းကျင် ထုပ်ပိုး ခြင်းနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသော ပတ် ၀ န်းကျင် နှင့်သက်ဆိုင်သော နည်းပညာ များ ၏ဒီဇိုင်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု တို့ပါ ၀ င်သည်။
အဆိုပါ ကြေငြာ ချက်အရ Lingang ဖက်စပ် ၏ မှတ်ပုံတင် ထားသည့် အရင်းအနှီး မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅. ၅ ဘီလီယံ ဖြစ်သည်။ SMIC သည် ၃. ၆ ၅၅ ဘီလီယံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ခဲ့ပြီး National Integrated Circuit Industry Investment Fund ၏ဒုတိယ အဆင့် နှင့်အခြား အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုက အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၉၂ ၂ သန်းနှင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၉၂ ၃ သန်း အသီးသီး ထည့်ဝင် ခဲ့ပြီး ၆၆. ၄၅% ၊ ၁၆. ၇၇% နှင့် ၁၆. ၇၈% အသီးသီးရှိသည်။
SMIC က ရှန်ဟိုင်း လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်ရေးဇုန် ၏ Lingang နယူး ခရိုင် အတွက် ဘက်ပေါင်းစုံ ဆားကစ် စက်မှု လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် မဟာဗျူဟာမြောက် အခွင့် အလမ်း များကို ဆုပ်ကိုင် ခြင်းအားဖြင့်, အသစ် ဖက်စပ် ကုမ္ပဏီ တည်ထောင် ခြင်း ကုမ္ပဏီ ထုတ်လုပ်မှု စကေး ချဲ့ထွင် ကူညီ ခြင်း, ထုတ်လုပ်မှု ကုန်ကျစရိတ် ကိုလျှော့ချ ခြင်းနှင့် wafer foundry န်ဆောင်မှု မြှင့်တင် ရန်, ကြီးထွားလာ စျေးကွက် နှင့် ဖောက်သည် လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့် ဆည်း ပါလိမ့်မယ် ယုံကြည် သည် SMIC ၏ ရေရှည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မြှင့်တင် ရန်။
ထို့အပြင် SMIC သည် နို ၀ င်ဘာ ၁၁ ရက်တွင် Jiang Shangyi သည် ကုမ္ပဏီ ၏ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အဖွဲ့ ၏ဒုတိယ ဥက္က chairman ္ဌ ၊ အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ နှင့် မဟာဗျူဟာ ကော်မတီဝင် အဖြစ်မှ နုတ်ထွက် ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ Liang Mengsong သည် အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ အဖြစ်တာ ၀ န်ထမ်းဆောင် ခြင်းမရှိ တော့ဘဲ ကုမ္ပဏီ၏ တွဲဖက် စီအီးအို အဖြစ် ဆက်လက် ရပ်တည် နေသည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:တရုတ်နိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်း ချစ်ပ် ထုတ်လုပ်သူ SMIC သည် တတိယ သုံးလပတ် တွင်စုစုပေါင်း ဒေါ်လာ ၁. ၄ ဘီလီယံ ဖြင့် အမှုဆောင် များကို ပြန်လည်ဖွဲ့စည်း ခဲ့သည်
Huawei သည် semiconductor device ထုတ်လုပ်မှု၊ photoresist နှင့်တတိယ မျိုးဆက် semiconductor ပစ္စည်း များတွင်
Huawei ၏ ဆက်သွယ်ရေး နှင့်နည်းပညာ ကုမ္ပဏီကြီး ဖြစ်သော Shenzhen Harbo Technology Investment Partnership (Limited Partnership) သည် Suzhou Jingtuo Semiconductor Technology Co., Ltd. တွင်